10 Ndima yeBhaibheri Unofanira Kuziva Kana Uchinyengeterera Ngoni | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Urongwa hwekuverenga Bhaibheri Kudzidza Bhaibheri 10 Ndima yeBhaibheri Unofanirwa Kuziva Kana Uchinamatira Tsitsi
Nhasi tichange tichitaura nezvegumi remavhesi eBhaibheri iwe unofanirwa kuziva kana uchinyengeterera tsitsi. Ngoni mariri chimiro chechisikigo mubatanidzwa wenyasha dzisina kukodzera, nyasha uye kuropafadza. Tsitsi dzashe dzinogona kuita chero chinhu uye kugadzirisa chero yakaoma mamiriro. Kristu akasiririswa uye akarapa vanorwara uye akamutsa vakafa. Tsitsi dzaMwari pavana veIsreal dzakavaita vanhu vaMwari, kunyangwe zvavo vakapandukira Mwari, tsitsi dzaMwari dzaive dzakaringana kwavari.
Tsitsi dzaMwari ndidzo dzatinoda. Kana Mwari vatiratidza Ngoni' Bhuku ra Varoma 9:15 Nekuti unoti kuna Mozisi: Ndichava netsitsi kune wandichava netsitsi naye, ndichava netsitsi kune wandinoda kunzwira tsitsi. Izvi zvinoreva kuti haazi munhu wese angafarire tsitsi dzaMwari.
Ndinoraira sechirevo chaMwari, pakati pevanhu vanozokodzera kunakirwa netsitsi dzaMwari dzisina kukodzera, ndinonamata kuti muverengerwe makafanira muzita raJesu. Paunenge uchinamatira tsitsi, shandisa anotevera mavhesi emubhaibheri:
Pisarema 25: 6-7
Rangarirai, imi Jehovha, tsitsi dzenyu huru norudo, nokuti zvakabvira kare. Regai kurangarira zvivi zvouduku hwangu, nokudarika kwangu; Maererano netsitsi dzenyu ndirangarirei, Nokuda kwokunaka kwenyu, Ishe.
Paunenge uchida kuregererwa uye kunzwirwa zvivi zvakakura zvawakapara, heino ndima yeBhaibheri yekunamata kuna Mwari. Tsitsi dzaishe ndedzekare uye Mwari achanzwira tsitsi nekukanganwa kutadza kwemurume nekumuropafadza. Namata kuna Mwari kuti unzwirwe tsitsi uchishandisa vhesi iri reBhaibheri.
Pisarema 145: 8-9
Jehovha anenyasha uye azere netsitsi, anononoka kutsamwa uye azere netsitsi. Ishe akanaka kune vese, uye tsitsi dzake dziri pamabasa ake ese. ”
Mwari anenyasha, azere netsitsi uye anononoka kutsamwa. Izvi zviri pachena kuti zvakaratidzwa mune nyaya yevaIsrealites. Zvisinei nezvakawanda zvakaitwa naMwari kwavari pavakange vari muEjipitori, murenje uye pamberi pegungwa, vakaramba vakaramba Mwari, vachizvisarudzira mufananidzo wakavezwa. Asi ishe ane nyasha uye anononoka kutsamwa, iye akavatungamira kupinda munyika yechipikirwa.
Izvi zvinosimbisa icho chokwadi chekuti hapana mumwe anokwanisa kuwana tsitsi dzaMwari.
"Nokuti Mwari akada nyika nokudaro, kuti akapa Mwanakomana wake mumwe oga, kuti ani naani anotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi."
Ndiani akakuudza kuti hausi muhurongwa hwaMwari. Iwe waive chimwe chezvikonzero nei Kristu akauya pasi kuzofira zvivi zvevanhu. Rugwaro runoti kuna Mwari akada nyika. Mwari vanokuda ndosaka vakatuma Mwanakomana wavo kuti afire pamuchinjikwa kuti ugoponeswa. Kwaive kuburikidza netsitsi dzaMwari kuti Kristu akauya pasi.
Iye zvino unogona kuchemera tsitsi uchishandisa zita raJesu.
VaEfeso 2: 4-5
Asi Mwari akafuma netsitsi, nekuda kwerudo rwake rukuru, rwaakatida narwo, kunyange takange takafa mukudarika, wakatimutsa pamwe naKristu (makaponeswa nenyasha) ... "
Mwari vakapfuma mutsitsi. Paunonamatira tsitsi, shandisa iri vhezheni vhezheni kuminamato. Akatida isu kutanga ndosaka tsitsi dzake dzichive nechokwadi pamusoro pedu. Kunyangwe pataive vatadzi Kristu akatifira. Idzi itsitsi chete kuti tirege kuparara muguva rechitadzo.
Jehovha Mwari wako ndiMwari ane tsitsi. Haazokusiye, kukuparadza, kana kukanganwa chivimbiso kumadzitateguru ako chaakapika kuti achachengeta.
Unonzwa here kuti wasiyiwa. Heino ndima yeBhaibheri yekukwezva tsitsi dzaMwari. Chinyorwa chinoti Mwari ane tsitsi uye haazokusiye kana kukanganwa chivimbiso chaakaita kumadzibaba. Mwari vakavimbisa Abhurahama, chibvumirano chakaendeswa kuna Isaka, ndokuzoti Jakobho chisati chave Chakakosha muhupenyu hwevaIsreal.
VaHebheru 4: 14-16
Tichiona zvino kuti tine Mupirisita Mukuru akapfuura nemumatenga, Jesu Mwanakomana waMwari, ngatibatisisei kureurura kwedu. Nekuti hatina Mupristi Mukuru, asingagoni kutinzwira tsitsi pautera hwedu, asi wakaidzwa pazvinhu zvose sesu, asina zvivi. Naizvozvo ngatiuyei takashinga kuchigaro cheushe chenyasha, kuti tigamuchire tsitsi, tiwane nyasha dzekubatsira munguva yekushaiwa. ”
Mwari vane tsitsi. Iwe haufanire kuve wakachena kana wakarurama usati wagona kutaura naMwari, Kristu atyora iwo muganho. Hatina Mupirisita Mukuru asingatinzwire tsitsi nezvivi zvedu. Tinogona muviri kuenda kuchigaro cheushe nechivimbo chekuti tichaita tsitsi. Kumbira Mwari ngoni nendima iyi.
Tito 3: 4-6
Asi pakaonekwa hunyoro hwaMwari Muponesi wedu uye nerudo rwake kuvanhu, Akatiponesa, kwete nekuda kwezviito zvatakaita mukururama, asi zvinoenderana netsitsi dzake, nekusuka kwekuzvarwa patsva nekuvandudzwa neMweya Mutsvene, waakadurura pamusoro pedu zvakapfuma kubudikidza naJesu Kristu Muponesi wedu.
Isu tinoponeswa kwete nekuwanda kwemabasa edu akanaka netsitsi dzeWekumusoro-soro. Anosuka zvivi zvechizvarwa chizere uye atiite vapenyu zvakare. Pfungwa dzedu dzinovandudzwa nesimba remweya mutsvene. Zvese izvi zvakaitika kwete nekuwanda kwemabasa edu akanaka asi netsitsi dzaMwari.
Asi nekuda kwechikonzero ichochi ndakanzwirwa ngoni kuitira kuti mandiri, mutadzi mukuru, Kristu Jesu aratidze mwoyo murefu wake mukuru semuenzaniso kune avo vachatenda maari uye vagowana hupenyu husingaperi.
Jesu ane tsitsi. Akauya munyika kuburikidza netsitsi dzababa uye Iye pachake achine tsitsi. Kana Jesu akasundwa netsitsi, zviito zvikuru zvinofanirwa kuitika.
Pisarema 103: 10-12
Haatiitire sezvakafanira zvivi zvedu, kana kutiripira zvinoenderana nezvakaipa zvedu. Nokuti sokukwirira kokudenga kumusoro, Ndizvo zvakaita kukura kworudo rwake kuna vanomutya; Sokuva kure kwamabvazuva namavirira, Saizvozvo akabvisa kudarika kwedu kwatiri.
Mwari haafunge kana kuita semunhu. Chinyorwa chinoti sezvo denga riri kure nepasi nekudaro rudo rwake kune avo vanomutya. Mwari anotida ndosaka achiratidza tsitsi nengoni patinozvida. Paunenge uchitsvaga tsitsi dzaMwari, shandisa ichi chinyorwa cherugwaro kuti unamate.
Mariro Mariko 3: 22
Rudo rwakatendeka rwaJEHOVA haruperi! Tsitsi dzake hadziperi.
Urwu ndirwo rugwaro runotitaurira kusvika parunako rudo netsitsi dzaMwari kuvanhu. Mwari vakatendeka. Varume vanogona kuzvirumbidza nemari yavo, vanogona kuzvirumbidza nezvehupfumi hwavo asi Mwari chete ndiye anogona kuzvirumbidza nezvekururama kwake. Rudo rwake haruna miganhu, saka zvakare tsitsi dzake dzinogara kubva kuchizvarwa kuenda kune chimwe.
Previous nyaya10 Vhesi reBhaibheri Unofanira Kunamata Napo Paunenge Uchida Kuporeswa
inotevera10 Bhaibheri Verse Iwe Haufanire Kanganwa Kana Uchinamatira Ruregerero
Mapisarema 13 Iwo Mharidzo Ndima Ndima
Munamato wekudzivirira Kubva kuHushe hweRima